Namtichi weellisaa Daadhii Galaan ajjeese hidha umurii guutuun adabame Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNamtichi weellisaa Daadhii Galaan ajjeese hidha umurii guutuun adabame
(bbcafaanoromoo)–Manni Murtii Olaanaa Godina Shawaa Bahaa dhadhacha yakkaa caamsaa 28, bara 2011 A.L.I ooleen dhimma ajjechaa Daadhii Galaan irratti murtii kenneera.
Himatamaan kun nama ajjeesuuf itti yaadee qophaa’udhaan halkan keessaa saatii 5:30’tti wellisaa Daadhii Galaan aanaa Liiban Cuqqaalaatti meeshaa waraanaa shugguxiidhaan rasaasa lama dhukaasuun lapheerra rukutee ajjeesuun himatame.
Himatamaan kun gocha ajjeechaa kana ‘hin raawwanne’ jechuun waakkateera.
Ragaan mana yaalaa irraa dhihaate miidhamaan artisti Daadhii Galaan meeshaa waraanaatiin du’uu kan eeru yoo ta’u rasaasni tokko reeffa miidhamaa keessatti argamuu ibsa.
Ragaa ‘forensic’ irratti qulqullaa’een rasaasni reeffa keessaa argame kan shugguxii himatamaan kun heeyyama itti qabu irraa kan dhukaafame ta’uu mirkanaa’eera jedhe manni murtichaa.
Haa ta’u malee himatni himatamaa Obbo Katamaa Raggaasaa irratti dhiyaate himatamaan kun itti yaadee gadi qabee dhukaasuun akka ajjeese hima.
Himatamaa Katamaa Raggaasaa mana murtii keessatti
Abukaatoon himatamaa himatamaan kuni galmee yakkaa kana dura akka hin qabnee fi nama barumsa hin qabneefi itti fayyadama meeshaa irratti hubannoo hin qabne ta’uu xiyyeefannaa keessa galchuun murtii akka salphisuuf gaafataniiru.
Himatamaa Katamaa Raggaasaas amma dura himatamees adabamees hin beeku, maatii 9 akka bulchuu fi maatii dadhaboon bulcha waan ta’eef adabbii naaf haa xiqqaatu jechuun gaafataniiru.
“Takkaa matii isaaf jedhee hin jiraanne, uummata Oromoof jedhee osoo olii gadi kaatu ajjeefame, [ajjeechaan isaa] sirriitti qoratamee ifa ta’uu qaba ture” yaada jedhus qabdi.
Obboleessi isaa maandhaa Guchii Galaan ammoo murtiin hidhaa umurii guutuu ni xiqqaata, du’aan adabamuu qaba ture jedha.
Ajjeechaan Daadhii Galaan warra artistichaaf waamicha taasisan dabalatee namoota hedduun ta’e jedhamee kan qindaa’edha komii jedhu kan qabu hiriyaan isaa Sisaay Bulbulaa murteen kun nama tokko qofarratti darbuu hin qabu ture jedha.
Abbaan Daadhii Obbo Galaan Wadaajoos murtichi xiqqaachuu fi namichi Daadhii ‘manatti waamee ajjeesise’ jedhan adabamuu dhabuu komataniiru.
Caamsaa 28/2011 Dhimma ajjeechaa Artist Daadhii Galaan irratti Dhaddacha mana Murtii Olaanaa Godina Shawaa bahaa.
Guyyaa har’aa manni murtii olaanaa G/Sh/bahaa Himatamaa Katamaa Raggaasaa irratti Artisti Daadhii Galaan ajjeesuu isaaf ragaa guutuun mirkaneessun murtii adabbii umrii guutuu itti murteesse!
Ganama osoo dhaddachi hin eegalin abbaa Artist Daadhii Obbo Galaan wadaajoo fi obboleeyyan Daadhii dabalatee Artistoonni biiroo Pirezedaantii mana murtii olaanaa g/sh/bahaa seennee Itti aanaa pirezedaantichaa argachuun komii haala dhimmichi ittiin ilaalamaa jiruu fi dhimmi ajjeefamuu Daadhii kuni nama tokkoon kan raawwate akka hin taane fi namoota hedduu shakkamanii too’annoo seeraa jala oollan akkasumas uummanni eeraa jiru bilisaan maalif akka gadi lakkifaman yoo gaafannu suni adeemsa seeraa akkasumas qoronnoo poolisii fi Himannaa abbaa alangaa malee manni murtii homaa gochuu akka hin dandeenye nuuf ibsan. Ammas namicha ajjeese caalaa yakkamtoonni hedduun duuba jiraachuu akka danda’an waan mamsiisaa miti. Dhugaan ni qal’atti malee hin cuttu. ni dhokatti malee hin baddu. ni turti malee hin haftu!